पोखरा मणिपाल अस्पतालमा झडप, लाठीचार्जबाट ३ घाइते - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
पोखरा मणिपाल अस्पतालमा झडप, लाठीचार्जबाट ३ घाइते
Published On : १९ चैत्र २०७४, सोमबार ०८:००
पोखराको मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा कर्मचारीको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । १० महिनाअघि देखि तलव र सेवा सुविधा बृद्धीको माग गर्दै आन्दोलनरत कर्मचारीहरुले केही सातायता प्रदर्शन गरेका थिए ।
पोखराको मनिपाल शिक्षण अस्पतालमा कर्मचारीको आन्दोलनमा प्रहरीको लाठीचार्जबाट ३ कर्मचारी घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरुमा राजबहादुर घर्ती कर्णबहादुर के.सी. र अमर गुरुङ हुन्। उनिहरुलाई घाँटी तथा टाउकोमा चोट लागेको छ।
दर्जन भन्दा बढी कर्मचारीलाई पक्राउ गरिएको छ। यतिबेला मणिपाल शिक्षण अस्पताल तनाबग्रस्त बनेको छ।तलवको १० प्रतिशत घरभाडा बापतको सुविधा दिनुपर्ने, खटिएका ईन्चार्जहरुलाई ईन्चार्जको छुट्टै भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, संचित विदाको १ सय ८० दिन (पूरै) विदा पाउनुपर्ने, अस्थायी र करारमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई स्थायी गराउनुपर्ने लगायतका माग कर्मचारीले राखेका छन् । “१ सय ८० दिन सञ्चित विदा पाउने अधिकार छ । हामीलाई ६० दिनभन्दा बिदा दिँदैन, आन्दोलनरत एक कर्मचारीले भने–५ बर्षदेखि अस्थायीमा धेरै कर्मचारी काम गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई तत्कालै स्थायी गरिनुपर्छ ।” उनका अनुसार नेपालीको १५ सय बढाउँदा भारतीय कर्मचारीको डेढ लाख बृद्धी हुन्छ । “अस्प्तालले सँधै र बोनस खाने, बाहिरचाहीँ सँधै आन्दोलन भएको देखाउने, उनले भने–यो सरासर ठग्ने काम हो । हाम्रो माग तत्कालै सम्बोधन गरियोस् ।”
कर्मचारीहरुले ११ दिनदेखि लगातार धर्ना दिँदै आएका थिए । सोमबार पनि ८ बजेदेखि १२ बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम थियो । तर विरामीका आफन्तले विरोध गरेपछि तनाव भएको हो । प्रहरीले कर्मचारी युनियन मनिपालका अध्यक्ष नवराज भण्डारीलाई पक्राउ गरेर लगेको मनिपालका कर्मचारी पविन बास्तोलाले जानकारी दिए । कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी अशोक सिंहले चाहीँ सेवामा अवरोध गरेका कारण नियन्त्रणमा लिनुपरेको बताए । “कर्मचारीले माग्ने प्रशासनसँग हो । विरामीलाई उपचारमा रोक्ने होईन, उनले भने–गलत गरे प्रहरीले नियन्त्रणमा लिन्छ ।” यसबारे मनिपालका प्रशासन प्रमुख भानु भारध्वाजसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । कर्मचारी नियन्त्रणमा लिएपछि आन्दोलनरत पक्ष तोडफोडमा उत्रेका छन् ।